Himalaya Dainik » थप १९ जनामा को’रोना पुष्टि, सं’क्रमतिको संख्या १४२५ पुग्यो !
थप १९ जनामा को’रोना पुष्टि, सं’क्रमतिको संख्या १४२५ पुग्यो !
काठमाडौं । शनिबार थप १९ जनामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परिक्षणमा १९ जनामा को’रोना पुष्टि भएको हो। योसँगै कर्णाली प्रदेशमा को’रोना सं’क्रमितका संख्या ७८ पुगेको छ भने एक जनाको मृ’त्यु भएको छ । शनिबार मात्र यसअघि १९४ जनामा को’रोनाभा’इरसको संक्र’मण पुष्टि भएको थियो । शनिबार साँझ थपिएका १९ जनासहित नेपालमा को’रोना सं’क्रमतिको संख्या १४ सय २५ पुगेको छ।
साथै, नेपालमा आजसम्म को’रोना सं’क्रमणबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको छ।
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार २२:१३